Boky fanombohana: inona ny fampiantranoana tranonkala? Inona inget domän? Fahasamihafana eo amin'ny anarana domain sy fampiantranoana tranonkala
Mba hananana tranonkala iray, mila zavatra telo ianao: anarana domain, fampiantranoana tranonkala ary tranonkala mandroso. Fa inona ny anaran’ny domän? Inona ingen fampiantranoana tranonkala? Tsy mitovy ve ireo? Zava-dehibe ny maha kristaly anao ny fahasamihafany alohan’ny hifindranao mamorona ary mampiantrano ny tranonkalanao voalohany.
0.1.1 Delad värd
1.1 Inona ingen anaran-toerana?
1.3 Webbhotell Sy Domännamn FAQ
Eritrereto izany ho leksak ny trano izay itehirizanao ny zavatra rehetra anananao; fa raha manangona ny akanjonao sy ny fanaka ianao, dia mitahiry rakitra dizitaly (HTML, antontan-taratasy, sary, horonan-tsary, sns) ao amin’ny tranonkala iray.
Matetika matetika ny teny hoe "fampiantranoana Internet" dia manondro ny orinasa izay manofa ny solosaina / servrar mba hamahanana ny tranokalanao ary hanomezanao ny fifandraisana amin’ny Internet mba hahafahan’ny mpampiasa har miditra amin’ny rakitra ao amin’ny tranonkalanao.
Domänregistrering – Ka afaka mividy sy mitantana ny domelina sy ny fampiantranoana avy amin’ilay mpamatsy ihany
E-posthotell – Mandefa mailaka avy amin’ny [mailaka voaaro]
Ny fanamafisana ny hårdvara fototra (fananganana mpizara) ary rindrambaiko (CMS, server OS, sns)
Ny teny hake "fampiantranoana webb" dia manondro ny mpizara izay manolotra ny tranokalanao na ny orinasa fampiantranoana izay manofa io efitrano seriver io aminao.
Toy izany ny fijerin’ny foibe ivotoerana iray avy ao anatiny, raha ny tena izy dia efitrano mangatsiaka be ary feno solosaina be dia be. Noraisiko ity sary ity nandritra ny fitidihanako Interserver datacenter cent augusti 2016.
Misy karazana servetera efatra samihafa: Shared, Virtual Private Server (VPS), Dedicated, ary Cloud Hosting.
Raha toa ny karazam-pifandraisana rehetra dia ho leksak ny foiben’ny tranokala ho an’ny tranonkalanao, dia tsy mitovy amin’ny habetsaky ny fitehirizana, ny fanaraha-maso, ny fepetra takian’ny teknika, ny haingon-tserasera, ary ny fahamendrehana. Asehoko anao ny fahasamihafana misy eo amin’ny fizarana, VPS, dedy ary cloud hosting amin’ity fizarana manaraka ity.
Ao amin’ny fampiantranoana iombonana, ny vohikala iray dia napetraka eo amin’ny tranonkala iray have toy ny tranonkala hafa, manomboka amin’ny vitsivitsy ka hatramin’ny an-jatony na an’arivony. Amin’ny ankapobeny, ireo sehatra rehetra dia mety hizara valan-tserasera amin’ny loham-pitaovana, leksak ny RAM sy ny CPU.
Mpanolotra iray voatokana ingen manome ny fanaraha-maso ambony indrindra amin’ny tranonkala amin’ny tranokalan’ny tranokala – Manokana solosaina iray manontolo ianao. Ny tranokalanao (s) ingen hany tokana voatahiry ao amin’ny server.
Fandraharahana – Miaraka amin’ny hery lehibe dia tonga … tsara, var ny vidiny. Ireo serivisy voatokana dia lafo be ary voatendry ho an’ireo izay mila ny fanaraha-maso fara-tampony sy ny fahombiazan’ny serivisy tsaratsara kokoa.
Inona ingen anaran-toerana?
Tsy anarana ara-batana izay ahafahanao manohina na mahita. Karazana endritsoratra izay manome ny maha-olom-pirenena anao (eny, anarana, leksak ny olombelona sy ny orinasa). Ohatra avy amin’ny anarana nomena: Google.com, Alexa.com, Linux.org, eLearningEuropa.info, ary koa Yahoo.co.uk.
Ny anarana rehetra dia miavaka. Midika izany fa iray ihany ny alexa.com eto amin’izao tontolo izao. Tsy afaka manoratra anarana ianao raha misy anaran’ny hafa (styrd av ICANN).
Mora kokoa ny mifindra någon amin’ny orinasa vaovao fampiantranoana rehefa misoratra anarana amin’ny sehatra fahatelo ianao. Raha tsy izany, dia tsy maintsy miandry ny orinasan-trano fampiantranoana anao ianao mba hamotsorana ny sehatra misy anao. Mety ho sarotra izany satria efa mycket koa ny orinasa fandraisam-bahiny.
Fa miandry … izany ihany no ahy (dinosaurie aho). Maro ny webbansvarig ingen mividy ny sehatra misy azy ary mametraka azy eo amin’ny toerana iray ihany. Ary tsy maninona – indrindra fa raha mipetraka amin’ny mpamatsy vahaolana fanta-daza ianao miaraka amin’ny firaketana ny fandraharahana tsara. Ity ny fomba fihevitra hafa nalaina tao amin’ny Twitter:
@WebHostingJerry dia nahita ny lahatsoratrao vao haingana: fampiantranoana. Misaotra. Fanamarihana vitsivitsy: ny anarana nomena dia mitazona anarana ho an’ny antontam-baomiera / domain name, amin’izay dia tsy hisy zavatra hanakorontana ny fiantraikany eo amin’ny hosting na ny sehatra na ny mifamadika. Izany dia tena toe-tsaina marina (fortsättning)
Webbhotell Sy Domännamn FAQ
Ny mpampiantrano tranonkala iray dia solosaina iray izay ametrahan’ny olona ny tranokalany. Eritrereto ho leksak ny trano iray itehirizanao ny entanao rehetra; fa raha tsy mitahiry ny akanjonao sy ny fanakao ianao dia mitahiry rakitra solosaina (HTML, antontan-taratasy, sary, horonan-tsary sns sns).
Fotoam-pizaran’ny serivisy, ny safidy fampiantranoana, ny vidiny, ny endri-panomezana, ny takelaka fanaraha-maso ary ny finiavana amin’ny tontolo iainana no zavatra sasany lehibe hodinihina rehefa misafidy ny webbhotell. Alohan’ny hisafidiananao dia ho a Arizonao aloha ny filànan’ny tranokala – Ity misy fanontaniana hanontaniana ny tenanao raha tsy hainao hoe aiza no hanombohana.
Ny mpampiantrano tranonkala tsirairay dia mazàna manana tombony sy fahazoana azy manokana momba ny endri-javatra, ka mila misafidy izay mifanaraka amin’ny zavatra ilainao indrindra ianao. Na izany aza, ny sasany dia mazàna manao asa tsara kokoa noho ny hafa. Nanangana rafitra fanaraha-maso antsoina sko "HostScore ”- mamela anao hizaha ny haringanam-pandehan’ny fampiantranoana sy ny fahatokisan-tena, ka ho a Arizonao antoka fa hijerena an’io tranokala io ianao alohan’ny handoazana ny fampiantranoana.
WordPress ingen rafitra fitantanana votoaty. Azonao atao ny mandray tranonkala WordPress mifototra amin’ny alàlan’ny mpamatsy serivisy fampiantranoana tranonkala rehetra.
Ny sasany amin’ireo vidiny tafiditra amin’ny fampiantranoana tranonkala iray dia ny hostweb, domändomän, ny famoronana votoaty, ny famolavolana sary, ny fampandrosoana ny tranonkala ary ny marketing. Na izany aza, ny fampiantranoana tranonkala mihitsy dia manantena handoa eo anelanelan’ny $ 3 ka hatramin’ny $ 10 isam-bolana ho an’ny fampiantranoana mahazatra. Ny fampiantranoana VPS dia handany bebe kokoa.
Ahoana ny fanovana avy amin’ny HTTP amin’ny HTTPS: Ny mpitari-dalana A-till-Z ho an’ny SSL